စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ နှစ်လအတွင်း လေပြင်း ၉၅ ကြိမ် တိုက်ပြီး အိမ်ခြေ ၂၇ဝဝ ကျော် ပျက်စီး - Yangon Media Group
”မေလ တစ်လလုံး သတိထား ရဦးမယ်၊ လေတိုက်မှု ခဏခဏဖြစ်တာကတော့ ဆည်ကြီး သုံးခုရှိတဲ့ ကျွန်းလှမြို့နယ်နဲ့ ကောလင်း၊ ကန့်ဘလူတို့က ကျေးရွာတွေမှာ များတာ၊ ရေထုနဲ့လေထု အပူအအေး အပြောင်းအလဲ မြန်တယ်၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဆို အဲဒီဘက်ကို အမြဲမပြတ်ပို့ထားရတယ်” ဟု ယင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစဝီလီဖရန့်က ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၃၇ မြို့နယ်ရှိရာ လေပြင်းဒဏ်ပြင်းထန်စွာမခံရသည့် မြို့နယ်များမှာ ခန္တီး၊ မြင်းမူ မြို့နယ်နှင့် နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသ နန်းယွန်းနှင့် လဟယ် မြို့တို့ဖြစ်ပြီး လေပြင်းဒဏ်ကို ခံစားရသော မြို့နယ်များမှာ ကောလင်းမြို့နယ်တွင် ခုနစ်ကြိမ်၊ ကျွန်းလှနှင့်အင်းတော် မြို့နယ်တွင် ခြောက်ကြိမ်စီ၊ ကန့်ဘလူ၊ ကလေးဝ၊ ကလေးမြို့၊ ပင်လည်ဘူး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာများတွင် ငါးကြိမ်စီခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံး၍ ဒဏ်ရာရသူ ခုနစ်ဦးရှိခဲ့ပြီး ဘေးအန္တ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ငွေသားနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၁၂ဝဝ ကျော်ဖိုး ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် အပူလျှပ်လူနာ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး အချိန်မီ ကုသပေးသွားမ?
‘အန်တီဝါတို့ ခေတ်တုန်းက ရိုက်ကူးတာကလည်း ကျစ်လျစ်တော့ ဆင်ဆာကလည်း သိပ်ဖြတ်စရာ မရှိပါဘူး’ ဝါဝ??